Smile & Co Hostal Alicante: Igumbi lamawele - I-Airbnb
Smile & Co Hostal Alicante: Igumbi lamawele
Alicante, Valencian Community, i-Spain
Igumbi e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Hostal Smile & Co
U-Hostal Smile & Co Ungumbungazi ovelele
- IGUMBI LAMAWELE
Igumbi lokulala elinemibhede emi-2 ka-90 cm ngayinye, ebheke egcekeni. Igumbi ngalinye linendawo yalo yokugezela yangasese.
Ukufinyelela emakamelweni kungezitebhisi noma ngokuphakamisa ukusuka esitezi sokuqala (hhayi ezingeni eliphansi) uma igumbi lakho lisesitezi sesibili.
- SITHANDA uzizwe usekhaya ehostela lethu. Ngalesi sizathu, sizama ukukunikeza ukwelashwa komuntu siqu kanye nendawo yasekhaya enothando ngemininingwane. Ingaphakathi lethu lonke lihlotshiswe ngokucophelela futhi yonke into inencazelo kithi. Leli akulona nje ihostela lethu kodwa futhi yikhaya lethu futhi singathanda ukwabelana nawe ngalo. Siyakwamukela ku-Smile & Co Hostal Alicante!
- SITHANDA uzizwe usekhaya ehostela lethu. Ngalesi sizathu, sizama ukukunikeza ukwelash…
- I-ALIACNTE ingelinye lamadolobha angasogwini eMedithera elinganikeza amanye amabhishi angcono kakhulu eCosta Blanca. Kodwa ngeke nje ulijabulele leli dolobha ngamabhishi alo kodwa nomlando ozungeze le ndawo. Izikhumbuzo nezimnyuziyamu ngokufanayo zinikeza ithuba lokuthola zonke izimfihlo zesikhathi esidlule nesamanje sika-Alicante. Konke lokhu kuhambisana nesipiliyoni esiyingqayizivele se-gastronomic okufanele sijatshulelwe ngaphansi kwelanga laseMedithera.
Sihlala sithanda ukuba nengxoxo encane nazo zonke izihambeli zethu lapho zingena ukuze sikunikeze izincomo zemisebenzi nezindawo zokudlela ngesikhathi sokuhlala kwakho. Amabalazwe wedolobha kanye nolwazi mayelana namadolobha izenzakalo zamanje kakhulu kuyatholakala at the reception.
Ibungazwe ngu-Hostal Smile & Co
- THINA, u-Audrey noCristian, sihlala esakhiweni esisodwa futhi sitholakala endaweni yokwamukela izivakashi kusukela ngo-8am kuya ku-9pm. Ukungena sekwephuzile kungahlelwa ngokwesicelo.
UHostal Smile & Co Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Alicante namaphethelo